Juuniyo – Blast Off to Kindergarten
Ilmahaaga ku dhiirrigali in ay waxyaalaha cusub bartaan; isticmaal qalmaanta midabyada leh, qalmaanta, maqasyada, guluusyada, jiinyeerrada, forgeetoyinka, qaadoyinka, iyo waxyaalaha kale ee yar yar ee maalin kasta la isticmaalo. Marka y bilaabaan dugsiga barbaarinta, caruur badan waxa ay yaqaanaan sida loo sawiro ama loo koobiyeeyo afar jibbarayaasha, saddegeeslayaasha, goobaboyinka, iyo qaabab kale. Kuwa badan waxa ay sawiri karaan qof, in ay gelidood labbistaan, dharka iska dhigaan iyaga oo aanla caawinin, iyo sida loo istimaalo shayada wax lagu cuno.
Ilmahaaga ku caawi in uu warqadda uu u jaro qaabab kala duwan. Ha jaro gobaaboyin, saddex geeeslayaal, afar jibbarayaal, iyo afar geeslayaal laydi ah ah. Ilmahaaga tus marka qaababkaan fudud inta laysku geeyo laga soo saaro dad, geedaha dhirta, guryaha, doonyaha, iyo waxyaalo kale. Ilmahaaga u ogolow in uu isku dhejiyo waxa uu sawiray isaga oo isticmaalaya wax isku dhejiya iyo in uu qoro magacyada waxa uu abuuray oo uu ku qoro qalmaanta midabyada leh ama calaamelayaal.
Guluusyo ku tol cad dhar ah oo ilmahaaga ha barto sida loo xirto iyo sida loo furo. Waxa aad waxyaabahan ku samayn kartaa adiga oo ilmaagaaga siiya jiinyeero, suuman, iyo wayabo yar oo tababar lagu qaato xirfadaha labbisashada.
Ilmahaaga u dhaar in ay diyariyaan miiska cuntada lagu caunayo. U sheeg magacyada qalab kasta ee cuntada lagu cuno iyo waxa loo isticmaalo. Ilmahaaga tababar ha ku qaato sidii loo qabsado lona isticmaalo forgeetada, qaadada, iy mindida. Si cayaar ah uga dhig! Digirta yar ee cagaaran forgeetada ma ku cuni kartaa,qaybta adag ee gallayda qaadada ma lagu qaadi kara, maraqa forgeeto ma lagu cuni karaa?
Ilmahaaga ku martiqaad in uu kula diro kaararka iyo warqadaha. Waraqadaha loo qorayo qoyska iyo saaxiibbada waxaha caruurta ku caawinaysa in ay warqadaha kala bartaan.
Ilmahaagaga kala hadal xeerarka baska, gaariga iyo ammanka gaadiidka. Haddii uu ilmahaagu uu dugsiga bas uu u racayo iyo haddii kaleba, caruurta oo idil waa in yaqaanan waxa ay yiihiin xeerarka ammanka gaadiidka.